SenseTime သည် အစုရှယ်ယာ ၁. ၅ ဘီလီယံ ကိုဒေါ်လာ ၇ ၆၉. ၈ သန်းအထိ စတင် ရောင်းချ ခဲ့သည် - Pandaily
တနင်္လာနေ့က ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း မှ ထုတ်ပြန်သော စာရွက်စာတမ်း တစ်ခုအရ တရုတ် အတု ထောက်လှမ်းရေး ကုမ္ပဏီSenseTime သည် ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်တွင် စတော့အိတ်ချိန်း တွင် အစုရှယ်ယာ များ စတင် ရောင်းချ မည်။ ကုမ္ပဏီသည် အစုရှယ်ယာ ၁. ၅ ဘီလီယံ ခန့်ကို ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၃. ၈၅ မှ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၃. ၉၉ အထိ ရောင်း ချပြီး ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ ၆၉. ၈ သန်း) အထိ မြှင့်တင် လိမ့်မည်။
သည် IPO မှာ SenseTime က ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို R & D အတွက် သုံး ဖို့ မျှော်မှန်း ထားပြီး ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းကို compan က ဖန်တီး ထားတဲ့ AI အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဖြစ်တဲ့ SenseCore မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ဖို့နဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ထုတ်ကုန် ဖွံ့ဖြိုး မှုနဲ့ အခြား ဉာဏ် ရည် တု နည်းပညာ သုတေသန လုပ်ငန်း တွေမှာ သုံး ဖို့ ရည်ရွယ် ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ၁၅% ကို စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထွန်း သ စ်စ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်း များနှင့် တရုတ်နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား ရှိ ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ စျေးကွက် ထိုးဖောက် မှုကိုတိုးမြှင့် ခြင်း အတွက်အသုံးပြု လိမ့်မည်။ ကျန် ၁၅% ကို အလားအလာရှိသော မဟာဗျူဟာမြောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများနှင့် ဝယ်ယူ ရေး အခွင့်အလမ်း များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မည်ဖြစ်ပြီး ကျန် ၁၀% ကို အထွေထွေ လည်ပတ်မှု လိုအပ်ချက်များ အတွက်အသုံးပြု လိမ့်မည်။
SenseTime ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကွန်ပျူတာ အမြင် နှင့် နက်ရှိုင်းသော သင်ယူမှု နည်းပညာ များ ကိုအဓိက ထားခဲ့သည်။ Prospectus တွင် ကုမ္ပဏီသည် အတု ထောက်လှမ်းရေး ဆော့ဖ်ဝဲ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို နေရာချ သည်။ အဓိကအားဖြင့် အတု ထောက်လှမ်းရေး မော်ဒယ် များ ကိုတီထွင် သည်၊ အထူးသဖြင့် algorithms ၊ စက်မှု လုပ်ငန်းကို software ပုံစံဖြင့် လုပ် ပိုင် ခွင့်နှင့် software လိုင်စင် နှင့် subscription အခကြေးငွေ များမှ ဝင်ငွေ ရရှိသည်။
SenseTime သည် ၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် အတွင်း ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ယွမ် ၁. ၈ ၅၃ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ၉၀. ၆၅ သန်း) ၊ ယွမ် ၃. ၀ ၂၇ ဘီလီယံ၊ ယွမ် ၃. ၄ ၄၆ ဘီလီယံ နှင့် ယွမ် ၁. ၆ ၅၂ ဘီလီယံ အသီးသီး ရရှိခဲ့သည်။ 2019 နှင့် 2020 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ တစ်နှစ်-on-တစ်နှစ် တိုးတက်မှုနှုန်း 63% နှင့် 14% ရှိ။, ယခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် အတွက် တစ်နှစ်-on-တစ်နှစ် တိုးတက်မှုနှုန်း နီးပါး 92% ရှိခဲ့ပါတယ်။ Frost & Sullivan က ၂၀၂၀ ဝင်ငွေ အရ SenseTime သည် အာရှ တွင် AI ဆော့ဖ်ဝဲ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ၏အကြီးဆုံး ကွန်ပျူတာ ရူပါရုံ ဆော့ဖ်ဝဲ ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ဈေးကွက် ဝေစု မှာ ၁၁% ရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:SenseTime သည်ဟောင်ကောင် IPO ခွင့်ပြုချက် ရရှိခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီက မှတ်ချက် ပေးရန် ငြင်းဆန် ခဲ့သည်
ကုမ္ပဏီ၏ အလားအလာ အရ SenseTime သည် စတင်တည်ထောင် ချိန် မှစ၍ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅. ၂၂၅ ဘီလီယံ (သို့) ယွမ် ၃၄ ဘီလီယံ (နောက်ဆုံး ငွေလဲနှုန်း) ဖြင့် စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁၂ ခု ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် SenseTime သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂. ၃ ဘီလီယံ နီးပါး ရရှိခဲ့သည်။ SoftBank သည် SenseTime ၏အကြီးဆုံး ပြင်ပ ရှယ်ယာ ပိုင်ရှင် ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ၁၄. ၈၈% နှင့် Taobao သည် ၇. ၅၉% ရှိသည်။ အခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများတွင် Primavera Capital Group နှင့် Silver Lake Partners တို့ ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့ နှစ်ခုလုံး သည် ၃% ကျော်နှင့် nbsp ၊ IDG က ၁ ဒသမ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ China Structural Reform Fund က ၁ ဒသမ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ ထားသည္။ နောက်ဆုံးတွင် Shanghai International Group ၊ Sailing Capital နှင့် CDH Fund တို့သည် အစုရှယ်ယာ ၁% စီ ပိုင်ဆိုင်သည်။